Mustaqbalka ifaya ee Tafaariiqda | Martech Zone
In kasta oo beeraha badankood ay arkeen quus weyn oo ku saabsan fursadaha shaqo ee horumarka teknoolojiyadda, haddana fursadaha shaqo tafaariiqdu hadda way sii kordhayaan waxayna raadinayaan inay noqdaan xulasho aamin ah mustaqbalka. Mid ka mid ah afartii shaqo ee Mareykanka ka jira ayaa ah tafaariiqda, laakiin warshadani waxay dabooshaa wax ka badan iibka. Xaqiiqdii, in ka badan 40% jagooyinka tafaariiqda waa shaqooyin aan ahayn iibinta.
Shaqooyinka 5-ta sare u kaca ee tafaariiqda waa falanqaynta suuq geynta, suuq geynta emaylka, raadinta dabiiciga ah, raadinta lacag bixinta, iyo warbaahinta bulshada. Way iska cadahay in e-commerce ay muhiim u tahay guusha tafaariiqda iyo maalgashiga ugu sareeya sanadkan wuxuu noqon doonaa mobilada, dib u habeynta goobta, iyo suuqgeynta. Qaar ka mid ah dukaamada tafaariiqleyda ayaa horeyba uga sii horreeyay ciyaarta iyaga oo wata hal-abuurnimo cusub oo ay kaga sarreeyaan inta kale. Kroger wuxuu leeyahay kamarado infrared xasaasi u ah kuleylka-jirka si loo go'aamiyo inta leenka ka baaraandega in la furo. Barnaamijka Walmart wuxuu u wareegayaa qaabka dukaanka si aad si fudud uga heli karto wax kasta oo aad raadineyso. Iyada oo la eegayo heerka kobaca tikniyoolajiyadda iyo kor u kaca ganacsiga e-commerce, waxaan arki doonnaa isbeddello badan oo ku yimid warshadaha tafaariiqda 5-ta sano ee soo socota marka loo eego sidii aan ku sameynay 100-kii la soo dhaafay. Xigasho wuxuu la wadaagayaa tirakoobka tafaariiqda iyo shaqaalaheeda, shirkadaha ay ugu sarreeyaan ciyaartooda, iyo maalgashiga ugu sarreeya ee e-commerce ee sannadka 2014 ee bogga hoose.
Mustaqbalka tafaariiqda iyo ganacsiga elektaroonigga ah waa mid ifaya oo shaqo, hal-abuurnimo iyo maalgashi lagu sameeyo.
Tags: aeropostalexigashocarmaxecommercekrogermacy'sbakhaarka ragganordstromnuugidtafaariiqda onlineqtreitafaariiqdasephorastarbucksbakhaarka weelkawalgreenswalmartwegmansCuntooyinka oo dhanzappos